बुवालाइ नै थाह थिएन ​​सुशान्त सिंह डि’प्रेसनमा भएकाे कुरा ​​, किन लुकाइयाे ? – Jagaran Nepal
बुवालाइ नै थाह थिएन ​​सुशान्त सिंह डि’प्रेसनमा भएकाे कुरा ​​, किन लुकाइयाे ?
​​सुशांत सिंह राजपूतका बुबा केके सिंहको भनाइ9जना व्यक्तिले पनि रेकर्ड गरेका छन् जसमा उनले आफू सुशांतको डि’प्रेसनको कारण थाहा नभएको दा’बी गरेका छ। सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले पुलिसलाई भनेका छन् कि उनलाई सुशांतको डि’प्रेसनको कारण थाहा छैन। सुशांत सिंह राजपूतसुशांत सिंह राजपूत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको मृ’त्यु पछि, अब पुलिसले के बुझ्यो कि अभिनेताले आफ्नो जीवन दिने निर्णय गरे।
पुलिस सुशान्तको नजीक भएका वा अभिनेताको क्यारियरमा संलग्न हुने प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रहरीले हालसम्म9जनाको बयान रेकर्ड गरेको छ। अभिनेताका बुबा – सुशान्तको डि’प्रेसनको कारण थाहा थिएन अब यी9जनामा ​​सुशांत सिंह राजपूतका बुबा केके सिंहको भनाइ पनि रेकर्ड गरिएको छ जसमा उनले आफू सुशांतको डि’प्रेसनको कारण थाहा नभएको दा’बी गरेको छ।
हो, सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले पुलिसलाई भनेका छन् कि उनलाई सुशांतको डि’प्रेसनको कारण थाहा छैन। यही होइन, केके सिंहले यो पनि भनेका छन कि उनको परिवारलाई पनि यस बारे केही थाहा छैन। याद गर्नुहोस् सुशांत सिंह राजपूतकी बहिनीले सुशांतलाई पैसाको अभाव छैन भनेर बताएकी थिइन तर उनको डि’प्रेसनको उपचार भइरहेको थियो। यस सम्बन्धमा पुलिसले उनकी दिदीसँग पनि कुरा गरे।
प्रहरीले हालसम्म गरेको का’र’वा’हीको बारेमा कुरा गर्दै पुलिसले निर्देशक मुकेश छाब्रा, सुशान्तको कुक, केयर टेकर र प्रबन्धकको बयान रेकर्ड गरेको छ। तर हालसम्म प्रहरीले र’ह’स्य सुल्झाउन सकेको छैन किनकि सुशांतको डि’प्रेसनको कारण के थियो।यदि पुलिसले विचार गरेमा उनीहरूले सुशांत सिंह राजपूतको कारोबार पनि अ’नु’सन्धा’न गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, महाराष्ट्र सरकारका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले भनेका छन कि कुनै दु’श्म’नीका कारण सुशांतले यो कदम उठाएको हो कि भनेर पुलिस पनि अ’नुस’न्धान गरिरहेको छ।